Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo markii 2aad baaqday. – Kalfadhi
MUQDISHO, 10 JAN 2019 (KALFADHI)-Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Dowlada Gobaleedka Hirshabeelle ayaa markii 2aad baaqday 8dii bishaan sida ay noo xaqiijiyeen Xildhibaano ka tirsan Maamulka Hirshabeelle.
Kalfadhiga Shanaad ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu balan-sanaa in la furo, 5ta bishaan balse Guddoomiyaha ayaa Xildhibaanada u sheegay in loo badalay sideedda bisha maadaama Guddoonka uu ka maqnaa magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle.
Xildhibaan Maxamed Yuusuf Colow oo u waramay Kalfadhi, ayaa sheegay in uusan ogeyn sababta ilaa hadda uu u furmi la’yahay Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle oo waqtigaan baahi weyn loo qabo.
“Ma ogin sababta hortaagan in la furo Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka laba jeer ayuu baaqday iyadoo aan noola sheegin sababta”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Yuusuf oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
“Baahi weyn ayaa loo qabaa in Baarlamaanka fariisto waqtigaan maxaa yeelay Dalka dagaal beeleedyo ayaa ka socda”, ayuu markale sheegay Xildhibaan Colow.
Sidoo kale Xildhibaan Sakariye Muumin Hilowle oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka hadlay sababta uu uqabsoomi la’yahay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle. Xildhibaanka ayaa sheegay in Xildhibaanada ay ku kala maqan-yihiin shaqooyin u badan xal u raadinta dagaal beeleedyada ka jira Hirshabeelle iyo shaqooyin kale sidaas darteedna ay suurtagal tahay iney dib u dhigtay Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka.
“Sidaa la socotiin Xildhibaanada waxay ku baxeyn sidii loo xalin lahaa dagaalada ka socda degmooyin ka tirsan Hirshabeelle, Guddoonkana shaqooyin kale ayey ku mashquuleyn”, ayuu yiri Xildhibaan Sakariye Muumin.
Maalmaha soo socda ayuu sheegay inuu furmi doono Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada ee Dowladka Hirshabeelle sida uu qorshaha yahay.
“Maalmo kadib waa furmi doonaa Kalfadhiga Xildhibaanada inta badan hadda dib ayey ugu laabteyn Jowhar”, ayuu markale Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Sakariye Muumin Hilowle.
“Waxaan maqlay in la sugayo masuuliyiin katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka furitaanka lagu marti qaaday”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sakariye Muumin Hilowle.
Xilldhibaanada Maamulka Hirshabeelle ayaa fasax ku maqan ku dhawaad saddex bil. Sidoo kale Xubnaha Baarlamaanka iyo Guddoonka ayaa intooda badan ka maqan Jowhar waxayna ku kala maqan yihiin, Muqdisho, iyo Kenya.